Adelaide nencazelo yegama, imvelaphi, translation
igama Kuyamangalisa ngomusa futhi emnene lase-Adelaide wangena ngolimi lwethu evela eJalimane. Kukhona namanje endulo, inguqulo yasekuqaleni igama okukhulunywe amantombazane azalwe e umndeni esihle. Adelaide ukuqamba ingane - bese ukhetha phetho ekhethekile wakhe. Yini? Funda ku!
Adelaide nencazelo yegama, imvelaphi kanye translation
Qamba nge izimpande German isivele okufushane yokuqothulwa kwegama German lasendulo linjengezwi Adelgeyda. Ehlanganisa amazwi amabili - Adal (yizicukuthwane) kanye heid (uhlobo lwe), kwakusho "uhlobo zasebukhosini." Qamba Adelaide, umsuka nokubaluleka engesiyo sihluke igama Adelgeyda, unezinye ahlobene amagama: Adele, Adeline, Alice.
Little Adelaide - intombazane ithule kepha ngempela eziphikelelayo. Ngezinye izikhathi ukuphikelela kwakhe kuba inkani. Kusukela ekuzalweni naphambi lokuzalwa lokuqala Adelaide ngokoqobo kunikeza abazali uphumule ngeminithi. Le ntombazane uyaphela udlubulunda, ngokuvamile ephambanisa imini nobusuku. Baby eba ontanga ngokushesha siqale sihambe futhi ukhulume phambi. Umehluko intombazane futhi abanye avaliwe. Asinakusho ukuthi Adelaide, ukubaluleka ogama lakhe lingase lihunyushwe ngokuthi "vysokorozhdonnaya" ngabantu, yena nje akafuni inkampani. ezithakazelisayo Okuningi ukuchitha isikhathi ngobuciko nokudlala ngonodoli noma ukusiza umama wakhe ngemisebenzi yasekhaya. Sikhula, Adelaide oyongena isimo senhlalo, kodwa kungaholela ukuncika umbono yabanye abantu.
Ziwumthwalo isigxivizo okhethekileko Intombazane okuthiwa Adelaide nencazelo yegama. Besifazane ngo umnikazi wawo athuthukile esemncane kakhulu. Baby uyabathanda abantwana, ukunakekela izitshalo nezilwane, eziningi ukufundwa, kucatshangelwe izincwadi noma yesayensi. Kukhona ngokwesimo isizotha wentombazane ukuzibamba.
Esinye isici - khona lomculo. Adelaide ucula kamnandi futhi Onendlebe umculo. Lezi amakhono ukuvumela intombazane ukufunda esikoleni umculo ngisho nokuphila kwabo ukuze art. Ngo isikole evamile Adelaide inqubekelaphambili ebonakalayo esiyenzayo. angase encane esikoleni samabanga aphansi. Kodwa kuwufanele intombazane nentshisekelo izinto njengoba kuzoba zithole imiphumela emihle.
Impilo Adelaide encane
Abazali wentombazane, ebizwa ngaleli gama Kumelwe sijabule ngokuthi ingane igula kakhulu kancane kaningi kunezinye izingane. Adelaide Impilo akubangi izinkinga, kodwa kukhona ezinye ubunzima futhi yena. Ngokwesibonelo, kukhona propensity izifo elingenhla ipheshana zokuphefumula. Ochwepheshe uqaphele ukuthi kulokhu ubuhlobo kubalulekile phakathi ukuma kanye wamaphaphu ivolumu.
Njengoba bekhula, ubunjalo Adelaide iyahluka kakhulu. Yiqiniso, kuyenzeka cishe kungabonakali, ngaphandle ishintsha ngokungalindelekile. prude Little iphenduka ibe intombazane nobudlelwano. Adelaide iqala ukuba siqonde zonke izinzuzo udumo yomphakathi, ngekhono kwenza umxhwele abanye. Futhi amsize kulesi isitayela eyinkimbinkimbi futhi umuzwa isu lokungacunuli.
Izici Zabantu amantombazane nge igama Adelaide
Isihogo - beauty langempela, ngenkathi uyakwazi ukuzinakekela, eduze kulandela imfashini, kodwa isitayela lalo. Intombazane ungachitha amahora ukuphotha phambi kwesibuko, ekuthandeni yena. Ngaphandle Adelaide kuholela yokuphila asebenzayo, yena ithanda ukuhamba, eziningi sasixoxa futhi bavamile ukuhlangana nabantu abasha.
Ukuthola indlela yokuphuma izimo angajwayelekile empilweni intombazane kusiza ingqondo kohlaziyo nayo ngeminyaka, ikhono ukuba kuyindida. By endleleni, lapho lezi zimfanelo ezibalulekile uyivumele ukuba baziphathe nabantu eqiniseka kakhudlwana. Sikhula, Adelaide kuba ezethemba, ezinzima. Uhlamvu zingavela ukuhluthuka futhi zibe nolaka.
Adelaide ungasebenza cishe noma iyiphi inkundla. Yena unesibopho nokunenhloso. Nomaphi wasebenza, uyobusa yonke indawo ukuze, wonke amaphrojekthi iyogcwaliseka ngesikhathi. Kulokhu, ungathola ebucayini, ukugwema izingxabano. Kungenxa yalesi sizathu, zihlonipha ozakwabo, Adelaide, ulalele umbono wakhe. Kodwa Adelaide, nencazelo yegama esixoxe Izindaba ezingenhla azilona careerists. Wayengeyena ethile ethakazelisa ngokukhethekile ukuba singaphethi tebuholi. Okungcono kakhulu ukuba usonkontileka wemfanelo.
Indima ebalulekile empilweni Adelaide ukudlala nomndeni. Nanguya sina ngomshado, angase afise ukuthulula zingamtholi umngane womshado umphefumulo. To Hell evuma ukushada, idinga isikhathi eside ukuhlangana abakhethiweyo. Kuyinto zomkhalazi kakhulu futhi ngokuvamile uba yisigqila. Kodwa ngisho lezi zimfanelo musa asize isikhathi eside ukuze ulondoloze umshado. Ngokuvamile umnikazi kwegama akazange ukushada noma ushintshe owakwakhe amaningi.
Adelaide: igama value futhi ukuhumusha nabesifazane abazalelwe ngezikhathi ezahlukene
Intombazane elinegama elifanayo ayezelwe ebusika, nobudlelwano. Nokho, kulula ukuthola ulimi ezivamile nabobulili obuhlukile. "Summer" Ada, kunalokho, kunzima kakhulu ukuba uvumelane nabantu. Adelaide ozalwa entwasahlobo, baye basungula umuzwa. Cishe yonke into la mantombazane babikezela kuyagcwaliseka. "Autumn" Adelaide abakwazi ukuhlala endaweni eyodwa. It has a umcabango athuthukile kanye inkumbulo ezehlukile.
Igama usuku Adelaide kungenziwa kugujwa Febherbari 5 - usuku abbess ongcwele Adelaide. Yena lihlonishwa amaKatolika iyona umvikeli we abafelokazi bonke, abazali abakuthola, abesifazane abangazangandoda kabusha zishada, futhi zikhulisa omakoti. Ngokusho ikhalenda Orthodox, intombazane, egqoke igama ungakwazi ukugubha igama ngosuku ngoDisemba 16.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini indaba yaqanjwa Adelaide, igama ukubaluleka, izici zako ezisemqoka.
Quantum Magic - Live Kabusha
Star Ertsgammy: incazelo, umlando, izithombe, kanye ukubaluleka njengentelezi. Indlela ukugqoka nendlela lokukhokhisa Ertsgammy inkanyezi
Lapho isayensi ephambana nezinto ezingokomoya: 7 izibonelo
Akashic Record - Uniform Imininingwane ensimini Zomhlaba
Honeycombs. izakhiwo ewusizo umkhiqizo yemvelo
Kanjani ukuphila okungcono? Okufanele ukwenze ukuze siphile kahle? Lokho kusiza abantu baphile kangcono?
I-satellite yokufakelwa yomhlaba
India, Kerala. Amaholide Kerala (India). Kerala (India) kumephu
Uphi ubuhlungu ohlangothini lwesokudla ngaphansi kwezimbambo kusho?
Robert Franklin Stroud: History of the lobugebengu United States eyaziwa
Umfula u-Olenek: umlomo, umthombo, isici. Uphi umfula u-Olenek?
Uhlelo ngokusebenzisana ehhovisi-uhlobo imibhalo Sibutsetelo